बुडर झरना पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बन्दै
गृहपृष्ठ अन्य बुडर झरना पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बन्दै
मनै लोभ्याउने ‘छहरा झरना’ जो सुकैलाई कवित्व भावमा परिणत गराउछ !
डोटी जिल्लाको जोरायल गाँउपालीकामा रहेको ‘छहरा झरना’ पर्यटकको आकर्षणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। करिब १०० मिटर माथी अग्लो ठाँउबाट झरेको झरनाको मनोरम दृश्य हेर्न अाज भोलि सयाैं पर्यटक दैनीकी यहाँ पुग्ने गरेका छन्।
डोटीको बुडर बजारबाट १० किलोमिटर पुर्वमा अवस्थित यो झर्नामा बाह्रै महीनामा पानी उत्तिकै मात्रामा बग्ने गर्दछ। झर्नाबाट झरेको पानीको फोहोराले पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ। दैनिक ५ सय देखि ३ हजार जना झरना भएको स्थलमा रमाइलो गर्न पुग्ने गरेका छन् ।
‘छहरा झरना’ को विकास गरेर आयआर्जनको स्रोत सङ्कलन गर्न सकिने यहाका स्थानीय बासिन्दाहरुको भनाई छ।
यस्तै अहिले सम्म थुप्रै म्यूजिक भिडीयो र टिकटक, फेसबुक लगायत नेपाली कथानाक चलचित्र साँग्लो फिल्मको छायाँङकन भैईसकेकोले अब यस ‘छहरा झरनाको’ मनोरन दृश्य फिल्ममा पनी हेर्न पाईन्छ ।पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा यो झरना निकै भाइरल बनेको छ । लकडाउन खुकुलो भए पछि अान्तरिक पर्यटक ह्वात्तै बढेका छन् । लकडाउने घरमा बसी बसी बोर भएकाहरू यस्तो रमणीय ठाउँमा पुग्दा स्वर्ग पुगेको अाभास गर्नथालेका छन् ।
पिकनिक स्पोर्ट्स समेत रहेको यो ठाउँमा तराईको गर्मी छल्न यति बेला पर्यटकहरूको भिडले खुट्टा राख्ने ठाउँ समेत हुदैन् ।
यस ठाँउलाई अझ सुन्दर र पर्यटकलाई प्रकृतीमयको आनन्द प्रदान गर्न र हरियाली वातावरणको मनमोहक थप्न स्थानीय बासिन्दाले त्यस क्षेत्रमा वृक्षारोपन समेत गरिसकेका छन् ।यससंगै यसलाई अझ प्रचारप्रसारसँगै आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न सके गाउँपालिकालाई आर्थिक स्रोत सङ्कलन गर्न धेरै सहज हुने स्थानीय बासिन्ताको भनाइ छ।
किन अवलोकन गर्ने ‘छहरा झरना’
हाम्रो देश नेपाल पहाडै पहाडको देश भएकोले देशका सबैजसो भागमा साना वा ठूला, होचा या अग्ला झरना थुप्रै मात्रामा देख्न पाइन्छ ।झरनाहरु पहाडका सौन्दर्य प्रसाधनका वस्तु हुन्, पहाडका गहना हुन् । ती मध्यको एक झरना हो डोटी जिल्लाको जोरायल गाँउपालीकामा रहेको ‘छहरा झरना’ यहाँ शरद ऋतुमा झर्ना हेर्न सबैभन्दा रमाइलो हुन्छ । झरना आँखालाई हेर्न रमाइलो मात्र होइन यसले मनको भावनालाई पनि स्फुरण गराइ दिन्छ । झरना वरिपरि मानिसको हल्लाखल्लाको आवाजको सट्टा चराहरुको कलरब ध्वनी हुने गर्दछ ।
त्यसले मानिसलाई मनमुग्ध पार्दछ । झरनाले जो सुकै साधारण व्यक्तिलाई पनि कवित्व भावमा परिणत गराई दिन्छ । साधाण मानिस कवि हुन्छ र कवितहरु महाकवि हुन पुग्दछन् । त्यहाँ पुगेर सबै मनमुग्ध हुन्छन्, फर्कनै मन गर्दैनन् ।यीनै प्रकृतीको सौन्दर्यताले भरिपुर्ण भएको झरना हो, ‘छहरा झरना’ ! प्रकृतीमा रमाउन चाहाने जो कोहि यहाँ पुग्नेको मन घर फर्कनै मान्दैन् ,यसले गर्दा यहाँ पर्यटकको संख्यामा वृद्धी हुँदै गएको छ ।